SOMALITALK - NOTEPAD
Casharkaan waxaan dib ugu jalleeceynaa adeegsiga "NOTEPAD" maadaama ay su'aalo dhawr ah kasoo noqdeen arimo laxiriira casharkaas oo aan horay usoo qaadanay.
NOTEPAD waxa uu kamid yahay barnaamijyada la adeegsado marka laqorayo fileka nooca loo yaqaan "TEXT", waana barnaamij aad u sahlan oo lagu qorikaro HTML, isla mar ahaantaana lagayaabo in uu kujiro badanaa Computer-ada, sababtaas ayaan ugu xushay qaybtaan barashada HTML.
Dabcan waxajira barnaamijyo kale oo farabadan oo qabankara hawsha NOTEPAD-ka, haddii aan qayb kaxusno kuwaas waxaa kamida WORDPAD. Sidoo kale waxaa la adegsankaraa "Netscape Composer" ama/iyo "Microsoft FrontPage" kuwaas oo toos loogu qorikaro qoraalka oo aanba loobaahnayn HTML, balse qofkii doonaya in uu meel wanaagsan kagalo qoraalada Shabakada Internetka waxaa u wanaagsan in uu kasoo bilaabo asaaska oo uu barto HTML markaas barnaamijyadaas kale waxay u noqondoonaan kuwo sahlan.
Haddii aan dib ugu soo laabano "NOTEPAD", waxaan halkan ku sharrixi doonaa habka aad magaca ugu bixineysid qoraalkii aad qortay iyo sida aas u xafideysid [SAVE AS], waana kuwa hoos kuqoran.
Si aad Computer-kaaga uga heshid Notepad, waxaad martaa wadadadan:
Start > Programs > Accessories > Notepad
Waxaa markaas kuu soo baxaya sida sawirka sare oo kale. [Taasi waa badanaa meesha "Notepad" uu kaga jiro Computer-rada.]
Sida kucad sawirkan "NOTEPAD" waa barnaamij aad u sahlan, waxa keliya oo uu kaa doonayaa waa inaad kuqortid xeerarka HTML, kaddibna aad tiraahdi xafid ama [SAVE].
Waxaad xusuusnaataa in marka aad tiraahdid [SAVE] ama [SAVE AS] uu magicii aad "FILE-KA" u bixisay uu kulingaxaayo ama raacinayo .txt oo u taagan "TEXT" taas oo markaas HTML keenii kadhigeysa mid aan shaqaynayn marka aan isku dayno in aan daalacanno. Si arrintaas aysan u dhicin dariiqadan hoose raac.
Marka aad qoraalkii HTML dhammaysid, waxaad riixdaa [click] FILE, waxaa markaas kuu soo baxaya sidan oo kale.
Kaddibna GUJI [Click] SAVE AS (Waxaad dhag-siin kartaa SAVE, laakiin waxaa lagayaabaa in file-kii uu kaa aado meel aadan oqoon oo markaa hadhow lawaayo meel uu jaan iyo cirib dhigay, waxaan had iyo jeer marka ugu horaysa ee aan file sameynayo adeegsadaa SAVE AS, hadii aan isla file-kii wax kabedelo oo marlabaad xafido waxaan adeegsadaa SAVE].
Halkaas marka aad mareysid u fiirso meesha ay kuqorantahay "Save as type:" waxaana lagayaabaa in ay ku hor qorantahay "Text Documents" sida kucad sawirkan hoose.
Halkaas waxaad kubedeshaa "All Files (*.*)", waxaa markaas kuu soo baxaya sidan oo kale:
Waxaa markaan lagaa rabaa in aad magac u bixisid file-ka aad samaysay, isla mar ahaantaana aad ku xafidid khaanad aad ogtahay, adiga oo maraya sidan:
File name: Ku hor qor magaca aad ubixisay file-ka oo ay ku lingaxantahay ama raacsantahay .html [waa la raacinkaraa .htm waxaanse anigu badanaa adeegsadaa .html laakiin ogow labaduba waa sax.]
Save in: Halkaasi waa meesha aad kabaareysid khaanadda aad ku xafidi doontid File-kaaga.
N.B: Xusuusnow in File-ka magiciisa loo bixiyo index.html uu yaha midka toos loo arkayo marka latago khaanad gaar ah [directory] oo katirsan boggaaga, isla mar ahaantaa haddii aad filekaas geysid khaanadda ugu sareysa ee boggaaga internetka [root directory] markaas wuxuu noqonayaa kan la arkayo marka toos loo soo garaaco cinwaanka bogaaga, tusaale ahaan marka lasoo garaaco html.somalitalk.com waxaa la imanayaa file aan u bixiyey index.html
Waxaan qiyaasayaa hadda in aad samaysay file, oo aad ku xafiday khaanad aad ogtahay, hadaba sidee u arki karnaa file-kaas inta aynaan ineternetka u dirin. Ogowna weligaa Ineternetka ha u dirin file-aadan tijaabin in uu shaqaynayo iyo in kale.
Si aad u aragtid file-kii waxaan u baahanahay [Browser] ama daalacde, waxaana badanaa la adeegsadaa Inernet explorer iyo Netscape iyadoo ay jiraan kuwo kale oo badan, laakiin casharkaan waxaan kusharxeynaa labadaas aan soo sheegnay ee Internet explorer iyo Netscape.
Waxaa lagayaabaa in barnaamijkani uu kujiro khaanado kala duwan marka laga hadlayo Computer-rada kala duwan, waxaase laga yaabaa in aad heshid haddii aad martid dariiqadan.
Start > Programs > Internet Explorer, marka uu barnaamijku diyaar noqdo waxaad riixdaa File si aad u heshid sawirka hoose oo kale.
Guji [Click] File > Open waxaa markaas kuu soo baxaya sidan hoos kuqoran:
Kaddib Guji [click] Browse.. si aad u heshid sawirka hoose oo kale
Si aad u furtid file-kii dariiqadan mar:
Look in: Kabaar khaanaddii aad horay ugu xafiday file-ka.
Files of Type: waa in ay ku hor qorraataa HTML Files si aad u aragtid file-sha HTML kuqoran ee kuxafidan Computer-kaaga.
Markaas File-kii guji ama dhag-kasii si uu usoo galo meesha ay kuqorantahay File name:
Guji [click] Open
Guji [click] Ok
Waxaa markas kuusoo baxaaya boggii, haddii HTML ay si sax ah u qorayd. Waana kan boggan aad hadda akhriyeysid oo aan eegay kahor intii aanan internetka usoo dirin.
Si sax ah ayuu iila muuqday sabataas ayaan internetka ugu soo diray si loo akhristo. Weligaa Internetka ha u dirin bog aadan tijaabin, waa iga talo.
Marka aad rabtid in file-kii aad ku furtid Netscape, waxaad mareysaa dariiqo ama hab aad ugu dhow kan kor kusharaxan ee ineternet explorer ka oo kale. Waxaa keliya oo ay ku kala duwanyihiin wa qaybo kamida qoraalka, waana kan qoraalka Netscape.
File > Open Page > Choose File > Open > Ok
Waxaa halkaas kaaga muuqda sida ay labada [browser], waa internet explorer iyo Netscape ay isugu dhowyihiin.
Marka aad ogaatey in file-kaagii la akhriyi karo oo HTML kii aad kuqortay uu sax yahay, tallabada kuxigtaa waa in aad u dirtid Internetka si loo wada arko.
Aad ayey u sahlan tahay adeegsiga iyo wax kuqoridda "NotePad". Waxaa keliya oo lagaaga baahan yahay in aad garaneysid xeerarka HTML, markaas xeerkii ayaad toos ugu qoreysaa shaashadda NotePad.
Sida aad ka aragtid sawirka, waxaan NotePad kuqoray xeerka kusharraxan Casharka Koowaad ee baro HTML. Waxaad qoreysaa xeerkii HTML, marka laxafido [SAVE] oo lagu daalacdo [browser] waxaa soo baxaya muuqaalkii larabey ee bog kasoo baxa shabakadda Internetka.
Xaqiiqadii NotePad wax kasta oo laguqoro waa nooca looyaqaan "TEXT", balse marka laqoro xeerkii HTML waxaa markaas loo bixiyaa magac lagu lifaaqayo .html si xeerkii uu u noqdo mid maxsuulkii larabey uu kasoo baxo.
NotePad aad ayuu uga duwanyahay "WordPerfect" amd "MS Word" marka laga hadlayo habka ay qoraalku uqormayaan. Marka "word" qoraalka laguqoro haddii qoraalkii uu kabato sadarka, markaas qoraalkii wuxuu ku bilaabanayaa sadarka labaad ee kaa kuxiga, sidaas ayuuna qoraalkii marwalba ugu bilaabanayaa sadar cusub markasta oo mid buuxsamo. Laakiin NOTEPAD habkaas umashaqeeyo ee qoraalkii wuxuu kuqorayaa hal sadar oo caawa iyo berri soconaya haddaan lajoojin ama khasab qoraalkii lagu geyn sadar cusub [taas oo ah marka aad riixdid furaha ENTER ee Keyboard-ka].
Waxaadna ogaataa in Notepad haddii aad qoraalkaagii hal sadar kuqortid iyo haddii aad dhawr sadar ku kala qortid ay isumaxsuul yihiin, haddii aad adeegsatey xeer iskumid ah. Halkaas waxaa kacad waxa uu yaqaan NOTEPAD in ay tahay xeerka oo keliya, ha laguqoro hal sadar ama sadarro badan.
Labadaan qaab ee qoraalku ugu qoranyahay NotePad waxaa kasoo baxaya maxsuul isku mid ah. Sidaan kor kusoo caddaynay NotePad waxa keliya ee uu garanayaa waa "TEXT" sikasta oo loo qoraana waa isku mid.
Waxaase waxbedelaya oo muuqaalka kama dambaysta ah kadhigi kara mid kala duwan waa 'HTML' kaas ayaana u baahan in waqtiga intiisa badan lagubixiyo si loo helo bog-Internet ah oo naqshaddiisu ay wanaagsantahay.
Xeerarka HTML waxay khasab kadhigaan in qoraalka loo daalacan karo qaabkii la rabey, NotePad-ka hashuusu waa in laguqorto xeerarkii. Muhiimadda uguweyn waxaa leh 'xeerarka HTML' haddii ay saxyihiin marka la adeegsado 'browser-ka' markaas waa la arki karaa qoraalkii. Haddiise xeerarka HTML wax kakhaldan yihiin markaas qoraalkii lama arkikaro marka la adeegsado 'browserka'.
Nasiib wacan, dadaal iyo guul, insha Allah, waana kan casharkii koowaad.
BOGGA HORE BOGGA XIGA